Tapaka tamin’ny fivoriamben’ny sendikan’ ny mpampianatra mpikaroka (Seces) omaly fa hatomboka amin’ny alatsinainy izao ny fanakatonana ny oniversiten’Antananarivo, izay hialohavan’ny fanentanana ny rehetra ny alatsinainy. Ny talata maraina kosa no hitokonan’izy ireo manoloana ny prezidansan’ny oniversite eny Ankatso. Nilaza ny mbola hanatanteraka fivoriambe indray izy ireo ny andron’ny
talata io mialoha ny fitokonana.
Nilaza fa hampiato ny fifandraisana sy ny fiaraha-miasa amin’ny antokon-draharaha misahana ny fitaterana an-drenivohitra (ATT) ny kaofederasiona nasionalin’ny mpitatitra (CNT) nandritra ny fivoriamben’izy ireo omaly. Misy fehin-kevitra andrasan’ny CNT avy amin’ny minisiteran’ny Fitaterana momba ny fanarenana ny lesoka eo amin’ny tontolon’ny fitaterana. Mandra-pivoakan’izay fehin-kevitra izay anefa no hanomezan’ ny CNT fe-potoana iray volana hampiatoana ireo tompon’andraikitry ny fitantanana ao amin’ny ATT.
Tapatapany, Mpanoratra Rijakely, 28.07.2012, 08:17	FIARAHAMONINA